Miisaska Dhagaxa ee Sintered ee casriga ah ee loogu talagalay sicirka qurxinta guriga Warshadaha iyo Warshadda | Xinzheng
Miisaska Dhagaxa ee casriga ah ee Sintered ee qiimaha qurxinta guriga
Miisaska dhagaxa dhagaxa ah waxaa laga sameeyaa alaabta ceeriin dabiiciga ah iyada oo loo marayo geedi socod gaar ah, waxaa lagu riixay saxaafad ka badan 10,000 tan (in ka badan 15,000 tan), oo ay weheliso tiknoolajiyad wax soo saar oo horumarsan, waxayna soo martay heerkul aad u sarreeya oo ka badan 1200 ° C. Waa nooc cusub oo ah maaddada galaas oo leh tilmaamo aad u waaweyn oo u adkaysan kara goynta, qodista, shiidi iyo hababka kale ee wax -soo -saarka.
Hordhac miisaska dhagaxa ee sinteredka ah
Codsiga miisaska dhagaxa ee sinteredka ah
Miisaska dhagaxa ah ee sintered -ka ah ayaa inta badan loo adeegsadaa beeraha guriga iyo jikada. Sida nooc cusub oo ka mid ah beerta alaabta guriga, marka la barbar dhigo alaabta kale ee alaabta guriga, Yanban Home Furnishing waxay leedahay astaamaha tilmaamaha waaweyn, wax-u-yeelashada xooggan, midabada kala duwan, iska caabbinta heerkulka sare, iska caabinta abrasion, anti-permeability, acid iyo iska caabin alkali, eber formaldehyde, ilaalinta deegaanka iyo caafimaadka.
Adkaanta dhagaxa dhagaxa ah ee sintered -ka ah ayaa ka badan kan dhagaxa dabka ah sida granite. Miisaska dhagaxa ee sintered -ka ah waxaa laga sameeyey budada dhagaxa dabiiciga ah, dhagaxa dhagaxa ah iyo agabyada kale ee ceyriinka ah ee dabiiciga ah, iyada oo loo marayo farsamo gaar ah,
Faa'iidooyinka waxqabad ee miisaska dhagaxa ah ee sintered
Marka la barbardhigo badeecadaha dhoobada dhoobada dhaqameedka ah, shuruudaha wax -soo -saarka dhagaxa dhagaxa ah ee sintered ayaa aad u sarreeya. Iyada oo ku saleysan xogta ay bixiyeen dhammaan dhinacyadu, laga bilaabo Juun 2019, tirada xargaha dhoobada gudaha (900 × 1800mm iyo wixii ka sarreeya) khadadka wax -soo -saarka ayaa dhaaftay 30, waxaana jira 4 khad oo wax -soo -saar oo soo saari kara 1200 × 2400mm iyo wixii ka sarreeya.
Waa in la tilmaamaa in miisaska dhagaxa ah ee sintered ah aysan ahayn dhagaxa dhagaxa ah. Shirkadaha soo saari kara dhalooyinka waawayn ma awoodi karaan inay soo saaraan dhagaxa dhagaxa ah ee sintered. Marka la barbardhigo dhalooyinka dhoobada ah, miisaska dhagaxa ah ee sintered ayaa la qodi karaa, la nadiifin karaa, oo si fudud ayaa loo jari karaa, waxayna ku habboon yihiin qaabab kala duwan. In kasta oo qaabka dhoobada dhoobada ay la mid tahay tii hore ee dhagaxa dhagaxa leh, haddana waxaa jira kala duwanaansho gaar ah oo ku saabsan sifooyinka maaddada iyo shaqooyinka.
Sida nooc cusub oo alaab ah, marka la barbardhigo agabyada kale ee dhaqameed, miisaska dhagaxa dhagaxa leh waxay leeyihiin sideed faa'iidooyin:
(1) Nabadgelyada iyo nadaafadda: Waxay si toos ah ula xiriiri kartaa cuntada, alaabta dabiiciga ah ee saafiga ah, 100% dib loo warshadeyn karo, aan sun ahayn iyo shucaaca lahayn, isla mar ahaantaana si buuxda u tixgelinaysa baahiyaha horumar waara ee aadanaha, caafimaadka iyo ilaalinta deegaanka .
(2) Iska caabbinta dabka iyo iska caabbinta heerkulka sare: Xiriirka tooska ah ee walxaha heerkulka sare ma xumaanayo, A1 miisaska dhagaxa ah ee aan dabka lahayn ma soo saari doonaan wax isbeddel jireed ah (yaraynta, dildilaaca, midab -beddelidda), mana soo saari doono wax gaas ama ur ah marka lala kulmo olol furan 2000 ℃. .
(3) Ka-hortagga ka-hor-tagga: Heerka qashin-qubka biyaha ee toban kun waa tilmaame cusub oo ku saabsan berrinka qalabka dhismaha ee dadku sameeyay. In kasta oo wasakhdu aysan geli karin, haddana ma siiso bakteeriyada meel ay ku tarmaan.
(4) Iska -caabbinta xoqidda: Adkaanta Mohs waxay ka badan tahay 6 darajo, taas oo iska caabbin karta xoqidda iyo isku dayga xoqidda.
(5) Iska caabinta daxalka: iska caabinta walxaha kiimikada ee kala duwan, oo ay ku jiraan xalalka, jeermis -dileyaasha, iwm.
(6) Way fududahay in la nadiifiyo: Waxaa lagu nadiifin karaa oo keliya tirtir tuwaal qoyan. Ma jiro shuruud dayactir oo gaar ah, nadiifintu waa mid fudud oo degdeg ah.
(7) Codsiga oo dhan: jebinta soohdinta dalabka, ka soo wareegidda alaabta qurxinta ilaa qalabka la adeegsado, naqshadeynta, farsamaynta iyo dalabka ayaa aad u kala duwan oo ballaaran, waxayna buuxiyaan shuruudaha dalabka ee heerka sare ah.
(8) Habaynta dabacsanaan leh: Qaab dhismeedka miisaska dhagaxa dhagaxa leh ayaa hodan ah oo kala duwan, waxaana loo habeyn karaa hadba baahida dadka isticmaala.
Cabbirka miisaska dhagaxa ee sinteredka ah
loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida dadka bakhaarka isticmaala.
Hore: Guddiga daboolista dhoobada ee aan dabka lahayn ee shooladaha alwaaxda, foornooyinka Pizza
Xiga: Budada dhoobada Bentonite ee timaha / wejiga / ilkaha
Hydrophobic Perlite saafiga ah ee ugu wanaagsan ee loo adeegsado Dibadda ...